အသုံးပြုသူအပေါ် Porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - သင့် ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းမှုအပေါ် - မလိုချင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
အသုံးပြုသူအပေါ် Porn ၏ဆိုးကျိုးများ။ လူအများစုအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမလိုချင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဤအပိုင်းသည်သာမန်ပြissuesနာအနည်းငယ်နှင့်သုံးစွဲသူများ၏လက်ကျန်ငွေကိုပြန်လည်ရရှိရန်လုပ်ဆောင်ပေးမှုများအကြောင်းပါရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကဲ့သို့သောဤအကျိုးဆက်များသည်များသောအားဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုပြီးနောက်ပေါ်လာတတ်သည်။ အခြားမလိုလားအပ်သောအမျိုးအစားသို့အရှိန်မြှင့်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအကျိုးဆက်များသည်အလျင်အမြန်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးများအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအပေါ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ Oz ကိုပြသပါ Porn-သွေးဆောင် ED စုံစမ်းစစ်ဆေး porn-သွေးဆောင် ED ရောဂါဆေးဝါးကုသမှုတရားဝင်မှုအားလက်ခံတွေ့ဆုံ ဒေါက်တာ Oz နှင့်ဆီးရောဂါပါရဂူများနှင့်စိတ်ရောဂါသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသူများသည်ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ reverse နိုငျပုံကိုရှင်းပြပါဝင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။
porn ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် The Mystery Flatline “ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအပြုအမူသည်တည်မြဲသော်လည်းလုံးဝမပြောပေ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်ကိုထွက်သောယောက်ျားတိုင်းသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော 'ပြားချပ်ချပ်များ' သတင်းပို့သူများ၏ရာခိုင်နှုန်းသည်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ အမြန်နှုန်းဖြင့်စတင်ခဲ့သောယောက်ျားများသည် ED ဝေဒနာရှင်များတိုးပွားလာနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Erectile အလုပ်မဖြစ်စေ Porn Tube ဆိုဒ်များဖြစ်ပါသလား ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များကိုကင်းဖို့ကဘာလဲဆိုတာအက်ကွဲ porn မှဖြစ်လိမ့်မယ်? အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ porn ၏ဘာမြူဒါတြိဂံရှိသနည်း
porn ပြဿနာများ: ဤတွင်အမျိုးသမီးများလာကြ Porn ၏သဘာဝလွန်လှုံ့ဆော်မှုသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်သည် လူကြိုက်များသောအွန်လိုင်းဆွီဒင်သတင်းမဂ္ဂဇင်းကမကြာသေးမီကအမျိုးသမီးများသည်“ ညစ်ညမ်းမှုမရှိသော” ဗားရှင်းကိုသတိထားမိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ "femstronauts" နှင့်တွေ့ဆုံရန်။
နုပျို ED: အအတ္ထုပ္ပတ္တိမှနောက်ထပ်? သုတေသီများအဆိုအရမြဲ ED များအတွက်လက်တွေ့ကုသမှုရှာကြံလူပျိုတို့အတွက် upswing ခြင်းဖြင့်အုတ်အုတ်သဲသဲနေကြတယ် အသစ်သောသုတေသန.
porn ဖြတ်? ပိုပြီးတက်ကြွစိတ်ခံစားမှုအဘို့ပြင်ဆင်ပါ အဘယ်အရာကို Post-porn စိတ်ခံစားမှုပြန်တက်တူသနည်း? ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိ“ ပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေး” နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသည်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအလွန်အမင်းအသုံးပြုခြင်းသည်လူအများကြားတွင်ပုံမှန်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပုံပျက်နေသလား။
porn နှင့်အမြင်: သင့် Vision ၏ယိုယွင်းနေသင့် Limbic ဦးနှောက်လား? porn သင်သည်သင်၏အသက်တာကိုတွေ့မြင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်။ အဆိုပါ limbic ဦး နှောက်သည်သင်၏စိတ်ဓါတ်များ၊ စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုအကြီးအကျယ်ထိန်းချုပ်သော ဦး နှောက်၏မူလအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏အမြင်ကိုပြောင်းလဲစေပြီးသင်၏စရိုက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ကိုရှင်းပြထားသည်။ ဤတွင်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်သူတို့ကမ္ဘာကြီးကိုမည်သို့ရှုမြင်သည်ကိုဖော်ပြပြီးသူတို့ထွက်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပင်။
porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကြီးထွားလာနေသောပြဿနာတစ်ရပ် အသုံးပြုသူများစွာအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်“ အသက် ၂၀ ကျော်သူများ၊ ယောက်ျားများသည်မိန်းကလေးတ ဦး နှင့် ထပ်မံ၍ မရနိုင်တော့ပါ၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ပြင်းထန်သော porn / masturbation အလေ့အထရှိသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားဖိုရမ်တွင်ပြောပြီး၊ တူညီသောအရာနှင့်ရုန်းကန်နေရသည့်အခြားယောက်ျားများထံမှတုံ့ပြန်ချက် ၅၀ မှ ၁၀၀ ရှိလျှင်၎င်းသည်အမှန်ဖြစ်သည်။
Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ် ဆယ်ကျော်သက်လိင် rewiring မြန်နှုန်းမြင့် porn အသုံးပြုမှုကိုလား? သူတို့ရဲ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအင်တာနက်က porn ကိုအသုံးပြုတဲ့သူယောက်ျားတွေအများအားဖြင့်၎င်းတို့၏ erectile ကျန်းမာရေးနှင့်လိင်စိတ်ပြန်လည်ကြာကြာယူ
Porn တက်အမျှစွမ်းဆောင်ရည်ကျသွား? ဒီကနေ့ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အာနိသင်များအကြားမသင်္ကာစရာလင့်ခ်ရှိနေပါသလား။ ခေါင်းစဉ်ကပြောပါတယ်သကဲ့သို့, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုပြင်းထန်သောဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှနောက်ကျလိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် porn နှင့်အတူပေါ်ပေါက်နိုင်သောဦးနှောက်ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ် plasticity အတွက်အပြောင်းအလဲများကရှင်းပြသည်။ porn အသုံးပြုသူများအ Chronicle လိုအပ်သော "ပြန်ဖွင့်" ကာလနှင့်သူတို့ညစ်ညမ်းမှရှောင်ကြဉ်လာသောအခါဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကြိုဆိုအပြောင်းအလဲများကို။
"ငါသည် Porn-related Erectile အလုပ်မဖြစ်ထံမှပြန်လည်ပုံ" တစ်ဦးက 28 နှစ်အရွယ်ကသူ့နာတာရှည် copulatory ခွန်အားမရှိခြင်းကုပေးတယ်။ လူတစ် ဦး သည်မိမိ၏ညစ်ညမ်းသော ED ကိုဖြေရှင်းရန်လမ်းကိုမှတ်မိသည်။ ပြissueနာမှာကြည့်ရှုသူများ၏အလွန်ကောင်းမွန်သော penises တွင်မဟုတ်ဘဲသူတို့၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများစွာသည်ပြtheနာအလွန်ပြင်းထန်သည့်အချိန်အထိဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုနားမလည်ကြပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ပိုမိုပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူမည်သည့် Erectile နှေးကွေးမှုမျိုးကိုမဆို“ ဖြေရှင်းရန်” လေ့ရှိသည်။ ဦး နှောက်ရဲ့သဘာဝအထိခိုက်မခံမှုနဲ့သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှု) ။
သင်ကသင့်ရဲ့ဂျွန်ဆင်ယုံကြည်နိုင်ပါသလား? အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအထီးလိင်ပိုပြီးပလပ်စတစ်အောင်သလဲ? တစ်ချိန်ကအမျိုးသားများသည်သူတို့၏လိင်အင်္ဂါနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုပြောပြရန်သူတို့၏ penises များကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ သင်တစ်ချိန်ကပျော်ရွှင်စွာပုံဖော်နိုင်ခဲ့သည့် porn သည်အလုပ်မလုပ်တော့လျှင်ကော။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူသည်သူတို့၏ပင်ကိုစရိုက်နှင့်မကိုက်ညီသောအမျိုးအစားသို့မြင့်တက်လာခြင်းသည်မဆန်းတော့ပါ။
အဆိုပါသူရဲဘောကြောင်ခြင်္သေ့ရုံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလွန်းခဲ့သလား porn နှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည် သိသာထင်ရှားတဲ့ porn စွဲမပြုလူတိုင်းအတွက်လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်ရှိပါတယ်။ ပြောင်းပြန်, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိခြင်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမဆိုလိုပါ။ သို့သော်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်များစွာကို porn အသုံးပြုသူများအတွက်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွားခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အထီးကျန်မှုတွေတှငျနထေိုငျဖို့ရည်ရွယ်ကြသည်မဟုတ်။ ကောင်းမွန်သောသတင်းအများအပြားသူတို့ porn ကြဉ်ရှောင်ကြသောအခါအခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ်ပြန်ဖြတ်ဖို့လွယ်ကူနှင့်ပိုပြီးပျော်စရာရှာတွေ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့် Mojo: တစ်ဦးကအာရုံကြောသိပ္ပံအမြင် Ex-porn အသုံးပြုသူများသည်များသောအားဖြင့်နောက်ကျောကသူတို့ Mojo ရ။ အဘယ်ကြောင့်? အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းတက်ပေးခြင်းကိုမကြာခဏထူးခြားတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်မှဦးဆောင်နေသည်။ ကရလဒ်များအရအိပ်ယာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုတိုးတက်မှုများကိုနောက်ကွယ်မှဖြစ်စျနိုငျသလဲ
'' လမျးဖွောငျ့လူတို့, ဂေး Porn 'နှင့်အခြားဦးနှောက်မြေပုံ Mystery အတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာ wiring အတွက်အော်ဂဇင်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာအတွက်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုအတော်အတန်သတ်မှတ်ထားသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ မကြာသေးမီကအာရုံကြောသိပ္ပံပညာကကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပလတ်စတစ်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ လူအများစုကသူတို့ပလပ်စတစ် ဦး နှောက်ကိုသူတို့တကယ်မလိုချင်တဲ့ semi-permanenti junk နဲ့အမှတ်မထင်ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်အလွန်ပြင်းထန်သောလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကမျှော်လင့်မထားသည့်လိင်ဆိုင်ရာအရသာပေါ်ပေါက်စေနိုင်ပုံကိုဆန်းစစ်သည်။
Porn ကစားတဲ့မှာဆုံးရှုံး သင်သည်အဘယ်သို့စောင့်ကြည့်သင့်ရဲ့အရသာပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါ အများအပြား porn အသုံးပြုသူများအတွက်, အရသာ shift-ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးခက်ခဲ-Core ပစ္စည်းမှမြင့်တက်။ စက်လှေကားမဆိုစွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏အဓိက feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် - တူညီတဲ့ဘက်ဇ်ရဖို့ ပို. ပို. နှိုးဆွ (သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး) လိုအပ်နေ။ လွင်ပြင်ဟောင်း porn ဆိုကြာကြာမပွုဘဲဖြစ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်လာမည့်အသစ်အလှည့်ကွက်ကိုရှာသောသူတို့မလိုချင်တဲ့နေရာများမှာရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမ Porn, သာ. ကောင်း၏အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်? သုတေသနညစ်ညမ်းပုံရိပ်သိမြင် function ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ porn ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့သူအသုံးပြုသူများမကြာခဏအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက်တိုးတက်မှုများသတိထားမိ။ အဘယ်ကြောင့်?
လိင်မှုကိစ္စအရသာမပြည့်စုံသောလိင်အင်္ဂါများသို့ဆက်သွယ်ခြင်း… Oops! ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်နှင့်ကလေးများအကြားလိုင်းပျောက်မှားသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ်ပါသလား? တစ်ချိန်ကဖြောင့်မတ်သောအမျိုးသားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆံပင်နှင့်ပုံမှန် labia များမှသိသာထင်ရှားသောအမြင်များကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏လိင်စိတ်ကိုဆွဲဆောင်သည်။ သို့သော်ယနေ့ညစ်ညမ်းသောကမ္ဘာတွင်စအိုကဲ့သို့သော“ ရိတ်ခြင်း” သည်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည် က de rigueur။ ကျွန်တော်တို့ဟာတခါကလေးတွေနဲ့အတူအရွယ်ရောက်လိင်စိတ်ဓာတ်တစ်ခုပြောင်းလဲအတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားပါသလား?
Bill Gates နှင့် သာ. ကောင်း၏ကွန်ဒုံး: မှားယွင်းနေသည် 404? ကွန်ဒုံးလိုက်နာမှုဆော့ဖ်ဝဲ, မဟုတ်ဟာ့ဒ်ဝဲတစ်ခုကိစ္စဖြစ်နိုင်သည် ကွန်ဒုံးအသစ်သည် penile အာရုံကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ သို့သော်ယနေ့စိတ်ချရသောလိင်စိန်ခေါ်မှုအများစုသည် ဦး နှောက်၏ဆော့ဖ်ဝဲတွင်ရှိသည်။
ပြန်လည်စဉ်းစား Ogas နှင့် Gaddam ရဲ့ '' တစ်ဦးဘီလီယံဆိုး Thoughts '' အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများ-သို့မဟုတ်ထုတ်ဖေါ်သူတို့ကိုပြောင်းလဲပါသလား? အဲဒါကိုသူတို့ရဲ့ပင်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများနှင့် ပတ်သက်. porn စွဲအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုပြောပြမဟုတ်သောကွောငျ့, စွဲလမ်း၏အဓိကသတိပေးလက္ခဏာသက်သေဖြစ်သောကြောင့်, ထူးထူးဆန်းဆန်း porn မှစက်လှေကားအဓိကအားအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဖြစ်ပါတယ်။
HOCD များအတွက် exposure ကုထုံး? porn-related HOCD ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုသမှု protocol ကိုတောင်းဆိုဖြစ်နိုင်သည် HOCD ဝေဒနာသည်အချို့အတွက်မူစွဲလမ်းမှုသည်ပုံမှန် OCD Exposure & Response Prevention ကုထုံးကိုအတားအဆီးဖြစ်စေသည်။ စွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး သည် (စမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှ) သက်သာရာရစေရန်ဆုတောင်းခံခြင်းကိုရပ်တန့်ထားလျှင်ပင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်သူ၏အသည်းအသန်စွဲလမ်းနေသောလမ်းကြောင်းများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်။